Jiilka cusub ee LibreOffice wuxuu raadinayaa inuu soo jiito dhalinyaro badan oo ka tirsan LibreOffice iyo Open Source Community | Laga soo bilaabo Linux
LibreOffice New Generation waxay dooneysaa inay dhalinyaro badan ku soo jiidato LibreOffice iyo bulshada il furan
Diiwaanka Dokumentiga (urur aan faa'iido doon ahayn oo kor u qaadaya barnaamijka furan ee dukumintiga ka shaqeeya, iyo kuwo kale) la ogeysiiyey iyojimcihii la soo dhaafay hamigaaga balaarinta bulshadaada adoo bilaabaya barnaamij cusub Jiilka Cusub ee LibreOffice, taas oo kuu ogolaaneysa inaad soo jiidato dad badan, gaar ahaan dhalinyarada.
Jiilka cusub ee LibreOffice en mashruuc loogu talagalay soo jiidashada dadka cusub, gaar ahaanna dhalinyarada, ku socota bulshada LibreOffice. Aasaasku wuxuu ku dhawaaqay in kastoo ay ku faani karto kala duwanaanta bulshada ay hadda ku sugan tahay iyo joogitaanka dadka da 'kasta leh, waxay aaminsan tahay in dhalinyarada ay gacan ka geysanayaan keenista fikradaha iyo habab cusub ee mashruuca.
Jiilka cusub ee LibreOffice: waa maxay?
“Maanta waxaan shaacineynaa mashruuc cusub: LibreOffice New Generation. Maahan barnaamijka softiweerka, ee waa mid ku saabsan dadka ka dambeeya. Sidaad u badan tahay inaad ogtahay, LibreOffice waxaa abuuray bulsho caalami ah oo leh aqoonyahanno la aqoonsan yahay iyo mutadawiciin, oo ka shaqeeya koodhka ilaha, tarjumidda, dukumiintiyada, naqshadeynta, QA, suuqgeynta, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo inbadan Waxaan dooneynaa inaan gaarno dad badan, ”ayay aasaaska ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda Jimcaha.
Sida laga soo xigtay boostada blogka, gabi ahaanba qof kasta ayaa ka mid noqon kara mashruucaSi kastaba ha noqotee, kaqeybgalka dhalinyarada ayaa la doonayaa lana dhiirigeliyaa
"Sababtaas awgeed, waxaan jeclaan lahayn in qof walba uu naga caawiyo inaan ka qaybgalno dhallinyarada iskaashanaya mashruuca oo aan ka caawinno inay ka qaybgalaan kooxaheena," ayay tiri aasaaska. Sidaa darteed, Aasaaska Dukumintiga wuxuu ku dhawaaqayaa in haddii aad tahay arday ama arday dugsi sare oo isticmaalaya LibreOffice, ay jeclaan lahayd inay kaa maqasho ama, si hufan, jawaabahaaga su'aalo taxane ah oo ay hayso. Maxaad u isticmaashaa LibreOffice? Sideed u horumarin kartaa?
Sida shaqada loo qabanayo, The Document Foundation ayaa sheegay in arday badan oo gacan ka geysata barnaamijyada bilaashka ah iyo mashaariicda isha furan waxay jecelyihiin inay helaan wax cadeynaya shaqadooda.
Tan awgeed, ayaa soo saaray calaamadaha furan ee tabarucaadka bulshadaKuwani waa calaamadaha gaarka ah ee leh metadata gudaha, oo muujinaya waxa qof sameeyay. "Marka waxaan jeclaan lahayn inaan bilowno inaan u qeybino xubnaha da'da yar iyo kuwa cusub ee bulshada sidoo kale," ayuu yiri.
Aasaaska Dukumintiga ayaa ugu yeeraya calaamadahaas Calaamadaha Furan waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku abaal mariyo shaqada dhalinyarada calaamadahaas.
“Waxaan haynaa fikrado iyo mashaariic kale, laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan war kaa maqalno! Maxaa kale oo aan kuu soo bandhigi karnaa? Sideen ku aqoonsan karnaa kuna abaalmarin karnaa shaqaalaha shaqadooda? Noo soo sheeg fikirkaaga… ayuu raaciyay.
Sidee looga diiwaan geliyaa LibreOffice New Generation?
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan horumarka mashruuca, aasaaska wuxuu ku casuumayaa dhinacyada xiisaynaya inay ku soo biiraan kooxdeeda Telegram. Halkaas, waxaad kagala hadli kartaa astaamaha furan iyo fikradaha kale ee ku saabsan LibreOffice New Generation iyada.
Xiriiriyaha waa kan.
“Waxaan rajeyneynaa inaan kula kulanno oo aan maqalno fikradahaaga iyo khibradahaaga,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Mike Saunders.
Ugu dambeyntii, kuwa wali kama warqabaan LibreOffice waa inay ogaadaan taas tani waa qol xafiis furan oo bilaash ah, oo laga soo qaatay mashruuca OpenOffice.org, waxaa abuuray oo dayactiray The Document Foundation.
Isku xirnaanta nadiifka ah iyo qalabkeeda horumarsan ayaa kuu oggolaanaya inaad soo bandhigto hal-abuurkaaga oo aad horumariso wax soo saarkaaga. LibreOffice waxay mideyneysaa codsiyo kala duwan: qorista softiweerka ka shaqeynta, xisaabinta xaashiyaha, daabacaadda qoraalka bandhigga, sawiridda arjiga sawirka iyo jaantuska, salka u haysa keydka xogta iyo keydka xogta iyo xisaabta tifaftiraha qaababka xisaabta
Nooca ugu dambeeyay ee ugu weyn ee LibreOffice, LibreOffice 7.0, ayaa la soo saaray bishii Ogosto ee la soo dhaafay.ama. LibreOffice 7 waxay soo bandhigtay dhowr isbeddel oo muhiim ah iyo xoojin, ay kamid tahay iswaafajinta sifiican loogu hagaajiyay qaybta Microsoft.
Horumarinta waxqabadka waxay ka timid xawaareynta ku saleysan Vulkan GPU ee lagu dhisay LibreOffice ka dib markii koodhka Qaahira loo wareejiyay maktabadda Google ee Skia. Taageerayaasha isbeddelka bilicsanaanta, waxaa jira muuqaal cusub oo ku saabsan mawduuca icon-ka ee Sukapura, oo ah mawduuca caadiga ah ee loogu talagalay dadka isticmaala macOS.
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan wararka, waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » LibreOffice New Generation waxay dooneysaa inay dhalinyaro badan ku soo jiidato LibreOffice iyo bulshada il furan
Aadam: Barnaamij fariin qarsoodi ah oo aan la aqoon baahin iyo wax ka badan
Midori Browser: Waa biraawsar biraawsar furan, furan, fudud, deg deg ah oo aamin ah